UZwane unalo icebo lokufaka iChiefs kwiTop 8 - Impempe
UZwane unalo icebo lokufaka iChiefs kwiTop 8
ULeonardo Castro noNkosinathi Sibisi
Uma umuzwa ekhuluma umqeqeshi obambile weKaizer Chiefs, u-Arthur Zwane, kulula ukubona ukuthi uyayazi into ezobenza bayishaye qede bayidudulele ngaphandle kweTop 8 iTS Galaxy. Amakhosi azovala isizini ngomdlalo ozothanda ukusinda neGalaxy eMbombela Stadium ngo 3 ntambama.
Elizonqoba kulamaqembu lizoziqinisekisela indawo kwiMTN8 yangesizini ezayo. Uma ukudlala ngokulingana kuzovuna iGalaxy. Kanti neBaroka izibhekile kule ndawo uma ingawina ngamagoli amaningi kwiSwallows FC.
UZwane nguye obehleli ebhentshini ngesikhathi iChiefs ibuya seyilandela ngemuva kwaze kwaba kabili, yagcina iyishaye ngo 3-2 iGolden Arrows maphakathi neviki. Uthi ngesikhathi belungiselela umdlalo we-Arrows, elinye iso beselivele likwiGalaxy.
“Besiphuma esimweni la umdlandla bewuphansi njengoba besibuya endukwini yeBlack Leopards. Bekumele sizame ukwenyusa ukuzethemba nemizwa kubadlali ngesikhathi silungiselela i-Arrows. Besazi ukuthi iyiqembu elihle kakhulu, kodwa elinye iso belithe njo kwiGalaxy,” kusho uZwane.
“Siyazi ukuthi badlala ngendlela ehlukile kodwa kukhona izinto ezifanayo kubo ikakhulukazi uma behlasela. Basebenzisa isivinini. Uma ubheka ukuhlasela kwe-Arrows, ishaya amaphasi asheshayo abheke phambili.
“IGalaxy nayo icishe ibe njalo, kodwa yona yinhle kakhulu uma umdlali ebhekene ngqo nembangi. Bavamise ukulithumela phambili ibhola bese belidlala uma selibuya. Balithumela phambili ku(Mxolisi) Macuphu no(Wayde) Lekay ababe sebelipholisa balibeke phambi kwabadlali basesiswini abasuke bebalandela ngemuva.
“Ukusuka lapho, uma behluleka ukudlula beqonde ngqo, balisa ezimpondweni la bebe sebeligoba khona. KOdwa ke sizobona ukuthi bazodlala kanjalo yini nakithi. Cishe bazobe beqaphe kakhulu befuna ukugcina iphuzu ngoba uma sike sabehlula, siyabakhipha kwiTop 8.
“Thina sizogadla ngakho konke esinakho ngoba siyakufuna ukungena kwiTop 8. Lokho kuzosenza sibe buthaka emuva, kodwa sikulungisile ukuthi sizokwenza njani uma silahlekelwa yibhola ukuqiniseka ukuthi abasilimazi,” kuchaza uZwane.
Previous Previous post: URasta udwebe uMcCarthy, manje usefuna ukucula naye
Next Next post: AmaZulu nethuba lokubuyisa izinduku ayishovele ehlathini iMaritzburg